Fironana momba ny marketing Influencer 7 andrasana amin'ny 2021 | Martech Zone
Rehefa mivoaka avy amin'ny areti-mandringana izao tontolo izao ary ny sisa tavela aoriany, ny marketing marketing dia tsy miovaova amin'ny ankamaroan'ny indostria. Satria terena hiantehitra amin'ny virtoaly ny olona fa tsy ny zavatra niainany manokana ary nandany fotoana bebe kokoa tamin'ny tambajotra sosialy fa tsy hetsika manokana sy fihaonana, ny marketing marketing dia nanjary tampoka teo alohan'ny fotoana iray ahafahan'ny marika manatona ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny media sosialy ao fomba misy heviny sy tena izy. Ankehitriny rehefa manomboka mifindra amin'ny tontolo aorian'ny pandemia izao tontolo izao, ny marketing amin'ny influencer dia mifindra amin'ny ara-dalàna vaovao ihany koa, miaraka amina fampifanarahana maro izay namolavola ny indostria tamin'ny taona lasa.
Izy ireo dia fironana fito izay azo ovaina amin'ny marketing influencer amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021 rehefa mihalavitra ny areti-mandringana izao tontolo izao:
Fironana 1: Ny marika dia manova ny fandaniana amin'ny doka amin'ireo mpivarotra
Raha nanadino ny fitomboan'ny indostrian'ny dokambarotra ny COVID-19, ny marketing marketing dia tsy nahatsapa ny enta-mavesatra toy ny indostria hafa.
63% amin'ireo mpivarotra no mikasa ny hampiakatra ny tetibolan'ny marketing amin'ny influencer amin'ny 2021.
Satria mitombo hatrany ny fampiasana tambajotra sosialy amin'ny indostria maro samihafa, ny marika dia mamily ny volan'ny dokam-barotra amin'ny fantsom-pifandraisana an-tserasera satria azon'ny marika fa ny marketing amin'ny media sosialy no iray amin'ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ireo mpijery an-tserasera sy hizarana ny fandefasan'izy ireo hafatra. Ny marketing Influencer dia ho lasa tena ilaina kokoa satria ny marika dia mitady fotoana ahafahana mifandray amin'ireo mpihaino azy amin'ny fomba tena izy sy tena izy an-tserasera.
Fironana 2: Ireo mpivarotra dia mitazona ny mason'izy ireo akaiky kokoa ny metika
Ireo mari-pahaizana momba ny varotra Influencer dia hitohy hanjary hiparitaka be kokoa, ary vokatr'izany, ny marika dia miankina amin'ny fahombiazan'ny marketing influencer tsirairay sy ny ROI an'ny mpanafatra azy ireo. Ary, miaraka amin'ireo marika efa nahita fiakarana avo lenta tamin'ny fampielezana marketing influencer nandritra ny herintaona, ny teti-bolan'ny marketing influencer dia tokony hitombo. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fitomboan'ny fandaniana, dia mijery akaiky kokoa ny metrika. Ireo metrika ireo dia hihombo ny fitsikerana rehefa manomana ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny famakafakana ny mpihaino influencer, ny taham-pandraisana anjara, ny hafanan'ny post, ny fahamendrehan'ny mpihaino ary ireo tondro fampisehoana lehibe.
Tsy azo lavina ny fiatraikany raha toa ka miditra ny influencer marina. Diniho Lahatsoratra navoakan'i Nicki Minaj's Instagram manasongadina azy manao Crocs mavokely mamirapiratra, izay nianjera avy eo ny tranonkalan'i Crocs noho ny firongatry ny fifamoivoizana an-tranonkala avy hatrany taorian'ny lahatsoratra. Ireo mpivarotra dia mila mametraka sarintany ny fampielezan-kevitr'izy ireo araky ny KPI mivaingana misy ny fahatsiarovan-tenany amin'ny marika, fampitomboana ny varotra, fiaraha-miasa amin'ny atiny, fifamoivoizana an-tranonkala, ary fitomboan'ny fisian'ny media sosialy.
Fironana 3: Ireo Influencer virtoaly dia mitombo amin'ny lazan'ireo marika
Ireo influencer virtoaly na influencer nateraky ny solosaina izay miasa toy ny tena fiainana dia mety ho ny "zavatra lehibe" manaraka amin'ny marketing influencer eo amin'ireo marika. Ireo robot-influencer ireo dia noforonina niaraka tamin'ny toetra amam-panahy, fiainam-bolo izay zarain'izy ireo amin'ny manaraka ary manao fifandraisana amin'ny alàlan'ny media sosialy amin'ny mpanjifa. Ireto influencer virtoaly ireto dia safidy manintona ho an'ny marika noho ny antony vitsivitsy. Voalohany, ny atiny vaovao dia noforonin'ny mpamorona sary mora foana, mametraka ny robot-influencer na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana rehetra, manala ny filan'ny fitsangatsanganana ny tena zava-misy.
Na dia nanjary zava-dehibe indrindra aza izany tamin'ny taon-dasa, satria ny areti-mandringana dia nahatonga ny fivezivezena mafy, dia hitohy ny fironana. Araka ny fikarohana natao vao haingana, nanao tao amin'ny tatitra The Top Instagram Virtual Influencers izahay tamin'ny taona 2020, fa misy vokany amin'ny mpihaino azy ireo robot-influencer ary manidy ny elanelana misy eo amin'ny marika sy ny mpihaino azy. Tao amin'ny fanadihadianay dia hitantsika fa ny influencer virtoaly dia efa in-telo heny tamin'ny fifandraisan'ny tena fitarihan'olombelona. Farany, ny influencer virtoaly dia azo antoka kokoa amin'ny resaka lazan'ny marika, satria ireo robot ireo dia afaka fehezina, soratana ary arahi-maso ny mpamorona azy ireo. Ireo influencer virtoaly dia manome fotoana kely kokoa handefasana hafatra amin'ny haino aman-jery sosialy manafintohina, tsy mahomby na mampiady hevitra izay mety hametraka marika amin'ny fomba fanaraha-maso simba.
Fironana 4: Misy fiakarana mitombo ao Nano sy Micro-Influencer Marketing
Nano sy micro-influencers dia mahazo vahana eo am-panehoana fifandraisana matanjaka amin'ny mpihaino akany.
Ny mpanentana Nano dia manana mpanaraka 1,000 ka hatramin'ny 5,000
Ny micro-influencer dia manana mpanaraka 5,000 ka hatramin'ny 20,000.
Matetika ireo mpanaraka ireto nano sy micro-influencers ireto dia mahatsapa fa ireo mpiorina ireo dia tena misy sy manokana, manome ny atiny, fandefasan-kafatra ary fampiroboroboana ny vokatra izay mahatsapa tena marina kokoa, mifanohitra amin'ireo influencer mahazatra, izay azo ampangaina ho manararaotra ny fitaomana. Ireo nano sy micro-influencers dia mahay mampivelatra fifandraisana lalina amin'ny mpanaraka azy, izay tena mirotsaka ihany koa. Ireto vondrom-piarahamonina akaiky akaiky ireto dia mpanohana, atokisana ary mpanan-kery dia azo inoana fa afaka miditra amin'ny "fisakaizana" ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo mba hahitana hevitra sy hevitra tsara. Ny marika madinidinika dia matetika nipaipaika ny micro-influencer, fa ny orinasa lehibe kosa manomboka mampiasa ireo vondrona influencers ireo koa.
Tamin'ny taona 2020, 46.4% ny marika milaza ny fampiasana ny tenifototra #ad dia nataon'ireo kaonty Instagram niaraka tamina mpanaraka 1,000-20,000.
Fironana 5: Mpanan-kery Manararaotra ny varotra ara-tsosialy hanentanana ny fanombohana ny marika / orinasany manokana
Nandany taona maro ny mpanentana media sosialy nanangana ny fanarahana azy ireo, nametraka fifandraisana eo amin'ny mpihaino azy ary mamorona atiny mifanaraka amin'ny akany. Ireo influencers ireo dia raisina ho toy ny mpiantsena manokana sy mpampianatra torolàlana ho an'ny manaraka. Ny fampiroboroboana ny vokatra hitarika fidiram-bola dia fahaiza-mitarika lehibe amin'ny influencer, ary satria matetika ny e-varotra sy ny media sosialy no miampita matetika, ny fiakaran'ny varotra ara-tsosialy dia mahazo vahana ary voaporofo fa fotoana iray ahazoana tombony ho an'ireo mahery setra.
Ireo influencer dia mitrandraka amin'ny varotra sosialy amin'ny alàlan'ny fandefasana ny marika sy orinasany manokana, amin'ny fampiasana ny heriny mivarotra ny vokatra. Raha tokony hampiroborobo ny vokatra ho an'ny marika hafa izy ireo dia "manodina ny latabatra" ary mifaninana amin'ny fizarana tsena. Mampiasa fifandraisana sy fahatokisan-tena manokana ireo mpanentana mba handrehitra ny fitomboan'ny marika sy orinasan'izy ireo manokana, izay tsy ampy amin'ny ankamaroan'ny mpivarotra.
Fironana 6: Ireo mpivarotra dia manome lanja bebe kokoa amin'ny fisolokiana amin'ny fisolokiana amin'ny marketing
Ny fisolokiana eo amin'ireo sehatra media sosialy, izay misy ny fividianana mpanaraka, ny fividianana ny tiana sy ny fanehoan-kevitra, ny fividianana ny fahitana ny tantara, ary ny poloka fanehoan-kevitra, dia manatratra ny laharana voalohany amin'ny marketing influencer. Ny fampitomboana ny fahafantarana ny fisolokiana na ho an'ny influencer na ho an'ny fanarahana azy ireo dia dingana iray lehibe amin'ny fampihenana ny asa fisolokiana. Sehatra media sosialy iray manolo-tena hanara-maso akaiky kokoa ny hosoka ny Instagram. Ny sehatra dia nametraka fameperana izay nandrara ny fikafika The Follow / Unfollow, ary raha oharina amin'ny taona 2019, ny salanisa isan-jaton'ny kaonty Instagram voarohirohy tamin'ny fisolokiana dia nihena 8.14%. Na izany aza, ny isan'ny influencer dia voan'ny mbola mijanona ho avo hatrany ny hosoka (53.39%), ary 45% ny mpanaraka Instagram dia bot, kaonty tsy miasa ary mpanaraka betsaka. Ny kaonty influencer sandoka dia mety handoa dolara an-tapitrisany dolara isan-taona amin'ny mpanao dokambarotra, ary arakaraka ny fiakaran'ny vidin'ny dokambarotra amin'ny marketing influencer dia nanjary manan-danja tokoa ny fikarohana hosoka.
Fironana 7: Manantena ny hahazo fihenam-bidy ho sehatra marketing i TikTok
TikTok no tantaram-pahombiazan'ny haino aman-jery sosialy malaza indrindra amin'ny 2020 miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika 689 tapitrisa isam-bolana. Ny sehatra media sosialy dia nanana Fisondrotana 60% amin'ny mpampiasa media sosialy mavitrika tamin'ny taon-dasa, ka nahatonga azy io ho sehatra haino aman-jery sosialy haingana indrindra eto an-tany. Ny fampiharana, izay natomboka ho fampiharana dihy sy mozika ho an'ny zatovo, dia nanomboka nahaliana ny olon-dehibe, orinasa ary marika.
Ny sehatra tsotra TikTok dia ahafahan'ny mpampiasa mamorona votoaty mora foana, mandefa horonantsary, ary mankafy ary manaraka matetika, izay mandrisika ny fandraisana andraikitra avo kokoa noho ny sehatra media sosialy hafa toa ny Instagram. Ny fomba fampiasan'izy ireo miavaka dia manolotra marika roa sy fitaomam-pahefana tombony amin'ny varotra vaovao sy ny fahaizana mahatratra ny tobin'ny mpampiasa malalaka. HypeAuditor dia maminavina fa TikTok dia hanana mpampiasa US 100 tapitrisa isam-bolana amin'ny 2021.
Zava-dehibe iray tokony hodinihina rehefa mamaritra ny sehatra marketing hampiasanao ny fahatakarana ny mpihaino kendrenao. Ny fahombiazan'ny fampielezana marketing influencer dia matetika miankina amin'ny fahalalana ny mpihaino anao sy ny fomba hisarika ny sain'izy ireo. Raha vantany vao voafaritra mazava ny mpihaino anao, safidy mora ny manapa-kevitra hoe iza amin'ireo sehatra marketing hahatratra ny mpihaino kendrenao. Ny sokajin-taona samihafa dia mazàna mampiasa sehatra marketing sasany, noho izany ny fisafidianana sehatra iray miaraka amin'ny taonanao kendrena dia paikady hendry.
43% ny mpampiasa Instagram manerantany dia eo anelanelan'ny 25 sy 34 taona ary mihoatra ny antsasaky ny mpampiasa TikTok (69%) dia latsaky ny 24 taona miaraka amin'ny 39% eo anelanelan'ny 18 sy 24, izay mahatonga ny olona amin'ity vanim-potoana ity ho vondrona mpampiasa lehibe indrindra.
Ho famintinana, ny Instagram dia mizaha ho an'ny mpanatrika matotra kokoa, raha TikTok kosa dia mankafy ny mpihaino tanora kokoa.
Sintomy ny tatitra momba ny varotra HypeAuditor's 2021 State of Influencer Marketing Sintomy ny tatitra momba ny hosoka nataon'i HypeAuditor
Tags: hypeauditorhery miasa manginafandaniana doka influencerhosoka influencermarketing marketinghosoka amin'ny marketing influencerfoibem-barotra influencermetatra marketing influencerfironana marketing influencermicro-influencerinfluencer micronano influencernano influencersnicki manajvarotra sosialyTikTokmarketing marketingmarketing amin'ny influencer virtoalyinfluencers virtoaly
17 Jiona 2021 à 4:37
Fironana lehibe ho an'ny marketing influencer. Misaotra anao nanoratra ity lahatsoratra mahafinaritra ity.